မြင့်မားသောအပူ Epoxy ဗဓေလသစ် မှအကောင်းဆုံး မြင့်မားသောအပူ Epoxy ဗဓေလသစ် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Soar Technology Co., Ltd ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် မြင့်မားသောအပူ Epoxy ဗဓေလသစ်စက်ရုံ, အလုပ်ရုံ, တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းကျနော်တို့သင့်လျော်သောနှုန်းထားများဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှ clients များထုတ်ကုန်ကျော်ထောက်ပံ့။ ထုံးစံအမိန့်နှင့်သာမန်အမိန့်နှစ်ဦးစလုံးရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကုန်သွယ်န်ဆောင်မှုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအရည်အချင်းမြင့်မားသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏သက်သေပြချက်နျူကလိယရှိသည်။ ကျနော်တို့ clients များမဆိုလိုအပ်ချက်များကိုင်တွယ်ရန်နိုင်စွမ်းကောင်းစွာအတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်ုပ်တို့အလိပ်ရှိသည်။ သင်ပိုမိုသိလိုပါက, အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190-မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်တီထွင်ထားတဲ့ epoxy ဗဓေလသစ်ကော်.အဆိုပါစေးစနစ်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကော်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်အထူးမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီးအလွန်ထူထပ်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်-ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ယက်.မာကြောထားသောပစ္စည်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပုံပျက်သောအပူချိန်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်စိုထိုင်းဆခုခံ;ဖြည့်စွက်ကာ,ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်၎င်းတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအားထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းရှိသည်,နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာ၎င်း၏ကော်အခြားဘုံ amine epoxy ဗဓေလသစ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်.အဆိုပါပျောက်ကင်းအောင်ကုသနေ-EP-2007-8190 တွင်မြင့်မားသောအပူပုံပျက်အပူချိန်ရှိသည်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်.SOAR ၏ခြောက်သွေ့အခြေအနေများ-EP-2007-8190 မုန့်ဖုတ်အချိန်နှင့်အပူချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်.မုန့်ဖုတ်အပူချိန်ပိုမိုမြင့်မား,လိုအပ်သည်တိုတောင်းမုန့်ဖုတ်အချိန်.မြင့်မားသောအပူချိန်ကုသပြီးနောက်,အဆိုပါဗဓေလသစ်ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုရရှိနိုင်သည်.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုပျောက်ကင်းစေသည်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် 200oC အထက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်မြင့်မားသောတုန့်ပြန်မှုမြန်သည်.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 lamination အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်,ဆေးထိုးမှို,ပုံသွန်း,အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ကော်,အဖြစ်လျှပ်စစ်သံလိုက်,အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ,လေကြောင်း,မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးလယ်ကွင်း.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် ECRoHS စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ၂၀၀၂ နှင့်ကိုက်ညီသည်/95.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/high-heat-epoxy-resin.html
အကောင်းဆုံး မြင့်မားသောအပူ Epoxy ဗဓေလသစ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် မြင့်မားသောအပူ Epoxy ဗဓေလသစ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်